သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> Frozen ငါး Ball
ရိုးရာ hotpot ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ Fish ငါးဘောလုံးထိုကဲ့သို့သောပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုငါးဘောလုံး, သို့မဟုတ်ပြည်ကြီးငါးဘောလုံး, ဒါမှမဟုတ်ကြော်ငါးကိုဘောလုံးအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောပွဲအတွက်ကိုသတိပြုမိနိုင်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း 30 ကတည်းကတည်ထောင်ခဲ့ပြီးပြီးမှ, ချန်ပီယံရေခဲသေတ္တာအစားအစာများအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးနှင့်အတူထုတ်ကုန်များအမျိုးမျိုးပေးတဲ့ professional hotpot ပါဝင်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျမွငျ့မားအရည်အသွေးနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူဆိုပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ # ကျနော်တို့ထိုင်ဝမ် # အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသောဆန်တင်ပို့သူများဖြစ်ကြသည် Taiwan အေးစက်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်သူ # ထိုင်ဝမ်အေးစက်နေတဲ့ပူပြင်းတဲ့အိုးတလုံးကိုအစားအစာကိုပေးသွင်း
FFB-3 : ကြော်ငါး Ball ကို
FFB-2 : ငါးအ Ball ကို
အကျော်ကြားဆုံး Keelung ငါး Ball ကိုအနှစ်သုံးဆယ်အဘို့အထိုင်ဝမ်အတွက်ရေပန်းစားလျက်ရှိသည်။ ဒါဟာ springy texture ရှိပြီး, အများစုမှာလမ်းဘေးစျေးသည်များနှင့်ပူအိုးတလုံးကိုစားသောက်ဆိုင်များအတွက်အကြိုက်ဆုံးပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျမတို့ကလည်းဘယ်ကြာရှည်သို့မဟုတ် whitening အေးဂျင့်ကို အသုံးပြု. မကျူးလွန်နေကြတယ်။ သူ့ရဲ့မူရင်းအရသာကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်၎င်း၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲတိုးချဲ့ဖို့, ကျနော်တို့ဖောက်သည်မဆိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘဲမွေ့လျော်ရှိသည်ထုတ်လုပ် IQF Quick-အေးခဲနေသော technique ကို apply လုပ်ပါ။
FFB-1 : ပုဇွန် Ball ကို
သင်သည်အစဉ်အဆက်ငါးဘောလုံးကိုဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာအထူးနှင့်အရသာရှိတဲ့အံ့ဩခြင်းရှိဖူးပါသလော ပုဇွန် Ball ကိုကျိန်းသေသင်အံ့သြသွားလိမ့်မယ်။ ထိပ်တန်း surimi နှင့်အတူ coated ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးလုပ်ကျောက်ပုစွန်များမှာအသားနှင့်ဖွဲ့၎င်း၏မျိုးစုံ tex​​ture နဲ့ပုဇွန် Ball ကိုမေ့လျော့ဖို့မဖြစ်နိုင်သောသမင်, ငါတို့၏-ကို ရွေးချယ်. အထူး၏အရသာနှင့်အတူသင်၏နှုတ်၌၎င်း၏ဖျော်ရည်နှင့်အတူအရည်ပျော်ပါလိမ့်မယ်။
FFB-4 : ပြည်ကြီးငါး Ball ကို
ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ရန် Frozen ငါး Ball အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေး, အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသော hotpot ပါဝင်ပစ္စည်းများအတူ။ သင်လက္မိန့်သို့မဟုတ်မည်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ # ကြှနျုပျတို့အရည်အချင်းပြည့်မီသောအေးစက်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာစက်ရုံမှာဖြစ်ကြောင်းပူပြင်းတဲ့အိုးတလုံး # ထိုင်ဝမ်အေးခဲစားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်သူ # အတွက်အထူးပြုထိုင်ဝမ် # ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူအတွက်အေးစက်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်အရည်အချင်းပြည့်ဝရှိပါတယ်